Faa'iidada (fedheebaha) Fursadaha ugu wanaagsan ee ugu fiican ee Dublin
Dublin ee ugu Fiican? Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah Fursadaha
Dhamaadka Dublin - waxaa jira qadar la yaab leh oo kala duwan, kuwaasina waxay noqon karaan kuwa ugu fiican !. © Bernd Biege 2015
Dublin waxay ka buuxsantaa barxadda - megadhubyada casriga ah ee loogu talagalay dadka dhalinyarada ah, oo ah jimicsi yaryar oo yar yar kuwaas oo aan la soo celin tan iyo 1916, fasaxyo siinaya meel loogu talagalay muusikada iyo muusikada aan ka badneyn godadka biyaha cabta.
Qaadashada makaanka ugu fiican wuxuu hoos u dhadhanaa dhadhanka iyo rajooyinka. Laakiin halkan waa liiska maqaaxida waxaan u maleynayaa inaan qiimeynayo booqasho markaad ku sugantahay Dublin oo aad raadinayso habeen wanaagsan.
Laakiin had iyo jeer xusuusnow in quruxda ay ku jirto indhaha dabeecadda iyo in tayada cuntadu ay tahay mid aad u badan oo ku tiirsan uun laftiisa, lakiin sidoo kale waxa laga filanayo ilaaliyaha. Sidaa u taga, sahamiyaan ... fiiri boggaga soo socda (sida farriinta si xur ah) oo ah "hagaha bilowga", ma aha sida injiilka.
Auld Dubliner. © Bernd Biege 2015
Ku dhajinta dhuxul ee bartamaha degmada Barwaaqaysan ee mashquulka ah , waxaa la yidhaa buug yar oo caan ah (oo ay ka mid tahay Jack Russell Terrier si nasiib darro ah isaga nafsaddiisa, isaga oo aan ahayn wax aan la garanaynin ah oo ka dhacaya agagaarka, ma aha oo kaliya eeyaha) , iyo dad badan.
Cinwaanka keligiis wuxuu xaqiijiyaa socodka deg dega ah ee inta badan dhalinyarada iyo mararka qaar aad u buuq badan. Weligaa kuma dhicin halkan, laakiin ma maqli doontid muusikada (ama ereyadaada) waqtiyada ugu badan.
Madaxa madaxa. © Bernd Biege 2015
Maqaalkan waxaa horey loogu soo sheegay James Joyce's "Ulysses". Waxyaabaha yaabka leh ee loo yaqaan 'Brazen Head' waa mid ka mid ah maktabadaha ugu da'da weyn Ireland (ruqsadda la soo saarey 1668, waxay ku shubeen bakhti hore ka hor, dhismaha asalka ahi wuxuu ka soo jeedaa qarnigii 12aad - inkastoo dhismaha hadda ka jira 1750) hay'ad boqolkiiba soddon sano ka hor.
Maanta, marmar ayaa loo soo booqdaa xiriirinta suugaanta, laakiin sidoo kale waa sababtoo ah waa waddanka Dublin.
Bar ee Old Jameson ee Distillery. © Bernd Biege 2015
Waxaa ku yaal magaalada hore ee Smithfield Village, dib loo soo celiyay (ka dibna wax yar ka soo dhacay qoryaha) sannadihii ugu dambeeyay, Old Jameson Distillery waa dalxiis dalxiis. Oo bar ka mid ah xaq u of soo galo ma aha mid ku haboon, qarsoodi ah.
Laakiin bararka, oo aad ka geli karto adigoon lacag bixinin, waxa uu qiimo u leeyahay qulqulaya harraad. Sababtoo ah waxaa laguu siiyay bakteer aad u fiican, cabitaan dheer oo qandho leh, iyo xitaa farsamada gacanta. Waxaa laga yaabaa in la gooyo gu'ga talaabadaada markaad u socoto Matxafyada Qaranka ee Kildare Street iyo Collins Barracks.
Dhagaxa dheer. © Bernd Biege 2015
Si laga helo gadaasha gadaasha ee Pearse Street Garda Station, oo ah aag aan loo baahneyn oo magaalada ka mid ah, waxaa la soo saaray buugan sida Viking Pub ee ugu da'da weyn ee Dublin. Waa hagaag, taasi waxay xoojin kartaa xuduudaha dhabta ah (xornimada waxaa la aasaasay 1754, markii Vikings muddo dheer la qabsaday).
Laakiin xaqiiqdii waa la qurxiyo si loo daboolo biilka, oo lagu daro walxaha Viking iyo xitaa muuqaalka Norse god Balder (labanlaab sida firfircoon). Caan ah oo inta badan ku dhuftey dad isku dhafan.
McDaid. © Bernd Biege 2015
Cuntadani waa mid ku haboon xarunta bartamaha. Dadka intooda badani waxay ku dhacaan cabitaan keliya, laakiin waa inaad ku raaxaysataa gudaha "sanka farshaxanka" si aad ugu qadariso McDaid. Xiriiro farshaxan ah ayaa laga helaa macaamiilkii hore - Patrick Kavanagh ayaa loo isticmaalay in uu halkan cabbo, sidaas awgeed (inkastoo tiro badan iyo qiyaaso badan) Brendan Behan. Ugu dambeyntii waxaa lagu xantaa in uu qaabeeyay qaar ka mid ah asxaabtiisa oo ku saabsan khamriga asxaabta ah ee kuxigaan - wuu rabi lahaa?
Maanta, McDaid waxay leedahay gudaha gudaha mugdiga ah, badan oo ka mid ah alwaaxda rasmiga ah, waana meel fiican oo loogu talagalay calaamad deggan. Ma aha mid aad u qanacsan sida riwaayad, inkastoo dhismaha hal mar ahaa mid.
John Mulligan waa
John Mulligan waa. © Bernd Biege 2015
Mulligan ayaa daadinta ku duubtay tuubooyinka illaa iyo 1782 (inkastoo aysan ahayn meeshan). Caanaha ayaa koray hal meel oo ka mid ah guryo kala gaar ah waxayna leedahay muddo dheer. Codsigeeda ugu weyn ee caanka ah, si kastaba ha ahaatee, waa falsafo fiican oo ay ku shaqeeyaan shaqaale khibrad leh. Iyo James Joyce liiska "nidaamyada", sida ugu badan ee shaqaalaha ka ahaa "Irish Press" (kaas oo isku dhejiyay 1995). Mulligan ayaa sidoo kale caan ku ah xiriirka uu la leeyahay halyeeyga caanka ah ee Kerry ee Jaceyl oo ah halyeeyga sharafeedkiisa waxaa lagu iibsaday John B. Keane.
O'Donoghue's. © Bernd Biege 2015
The Big Dad ee Muusikada Muusikada - O'Donoghue ee Merrion Row wuxuu ahaa nasiib-darro bilaabay xirfaddiisa "Dubliners", Irland's folk folk and ballad. Sidaa daraadeed sameynta O'Donoghue ee nasiib darrada ah ee taageerayaasha dadweynaha booqanaya Dublin.
Cunnadu waxay heli kartaa dad badan, gaar ahaan xiliga xilliga dalxiiska, iyo marka muusikada lagu noolaado. O'Donoghue waa mid aad u ballaadhan oo udhow ... oo waxay u baahan tahay inay noqoto, sida barxadku ku socoto dhowr jeer, oo marwaliba waxay yeelan doonaan dad badan oo soo booqda.
Porterhouse. © Bernd Biege 2015
The Porterhouse, oo ku yaalla barxadha Temple Bar iyo kaliya dhagax dhagax laga soo tuuray qalinka Dublin iyo hoolka magaalada, oo la furay sannadkii 1996kii oo ahaa xerada ugu horeysa ee Dublin. Taasi ma dhicin karo, waxaa ka mid ah Ganacsatada Guinnes-ku qafaalan jiray ilaalada waayeelka ah.
Laakiin way sameeyeen. Haatan waa hey'ad Dublin oo hadda ah sidaad ku heli karto muddo labaatan ama sanadood ah. Cunto caan ah oo lagu raaxaysto biirka hammiga, ama timahaaga hoos u dhigo.
Sweetman's. © Bernd Biege 2015
Markii hore waxaa loo yaqaan "Messrs Maguire", meeshan weyn ayaa ka baxsan afar dabaq oo waxay ku faantaa maadada yar yar. Isku-dubbaridka ku-meel-gaadhka ah ee barashada, barafka habeenkii, iyo makhaayadku waa caan ku ah beertiisa, iyo sidoo kale meel lagu kulmo dad ka dhow fog iyo fog.
Goobta waxaa laga yaabaa inay kaalin weyn ka ciyaaraan halkan - marka laga eego O'Connell Bridge, Sweetman's waa bartamaha sida ay u hesho.
Degmada Dublin Bar Bar
Easter jooga Ireland
9 Hudheelka Dublin ee ugu fiican ee 2018
Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan Maalinta roobka ee Kauai
Waxa la sameeyo Maalinta Xusuusta ee Northeast Ohio
Iibsiyada ugu fiican ee NYC Ice Cream Shop
Maalinta Madax banaanida ee Mexico ee Los Angeles 2016
15 Maqaalka Caadiga ah iyo Diidmada ee Mardi Gras ee New Orleans
Baro wax badan oo ku saabsan Giriiga Ilaah ee Apollo
Safaaradda Shiinaha iyo Qunsuliyadaha Mareykanka
Maxaad Adkeysaa Inaad Sameyn Kartid Safarka?
Akron Fitness Clubs oo lacag la'aan ah
Shirkadaha Diyaarinta Oklahoma City
Dhaqdhaqaaqyada Twin Ciyaaraha ah ee Ka Dhici doona Miisaaniyaddaada Maaliyadeed
Cimilada Xagaaga ee Woodrow Wilson Plaza
Mighty Mudane Mania 2017